FANAFOANANA NY ASAN-JIOLAHY : Hanome valisoa ho an’izay manome vaovao ny Kaomisera Jules
Mbola manao sesilany hatrany ny asan-jiolahy ao Toamasina. Asan-jiolahy amin’ny endriny maro, fanendahana, vaky trano, fanafihana mitam-piadiana. 5 juin 2018
Saika isan’andro, dia ahenoana vaovao momban’ny tsy fandriampahalemana hatrany ao Toamasina.
Mihorohoro ny mponina. Manoloana izany rehetra izany, ny alahady 3 jona lasa teo, nisy ny antso nataon’ny Kaomisera Rafaliarivo Jules Kaomandin’ny hery vonjy taitra eo anivon’ny polisim-pirenena ao Toamasina na ny Fip. Anisany antso nataony ho an’ny vahoakan’i Toamasina ny tokony hanamafisana ny andrimasom-pokonolona isam-pokontany. Faharoa, tokony tsy hisaraka kiririoka ny olon-drehetra. Raha lasan’olon-dratsy ny finday, dia ny kiririoka no mba ampiasaina tsofina haingana.
Niantso fifanomezan-tanana amin’ny fanomezam-baovao azy ireo ihany koa ny Kaomisera Rafaliarivo Jules. Nambarany nandritra izany fa misokatra 24 ora amin’ny 24 ora ireo laharan-taroby ahazoana mivantana ny Fip Toamasina. Izy izay nanambara fa vonona hanome valisoa manokana ho an’izay rehetra manana vaovao marim-pototra ahafahana misambotra an’ireo jiolahy mampihoroho an’i Toamasina.
Toky no nomeny fa hotazomina ho tsiambaratelo tanteraka ny mombamomba ny mpanome vaovao.